Kiimikooyinka Qaadka Ku Jira Iyo Saamaynta Maskaxda W/Q: Cali Cabdi Coomay | Somaliland Today
Home Advertise with us Contact us Monday September 15, 2014 Skip to content
← Guddoomiye Xamarji Oo Hakiyey Mooshin La Doonaayey In Xilka Lagaga Qaado Maayarka Burco
Hambalyo Maamulka Cusub Ee Tv-Ga Qaranka Siday U Halgamayaan Waana Dhalinyaro Aqoon Yahano Ah →
Kiimikooyinka Qaadka Ku Jira Iyo Saamaynta Maskaxda W/Q: Cali Cabdi Coomay
1. Kaathiin ( cathine) waa maado kiimiko ah, oo laga helo geedka qaadka, waxay keentaa firfircooni aan xoog lahayn. Waxay ku badan tahay qaadka inta la tuuro ( garaabada). Waanay ku yar tahay inta la cuno ee baarka sare ah ee jilicsan. Maadadani
waxay inta badan waxay saamayn xoogan ku yeelataa xagga maskaxda, waana ta keentay in dadka cunaa ay waashaan. Dadka waallan ayaa aad u cuno garaabada oo ay kaathiintu ku badan tahay. 100-kii garaam ee qaad ah, waxa ku jira 120 milligaraam oo kaathiin ah.
2. Kaathinoon ( cathinone) waa maado kiimiko ah, oo laga helo qaadka waxay keentaa mirqaanka iyo firfircooni fara badan. Waxay qofka ka dhigtaa mid faraxsan oo murugo aanay haynin. Wuxuu is-moodaa inuu wax walba haysto, oo aanay waxba ka maqnayn. Maadadani waxay ku badan tahay caleenta sare ee qaadka. haddii qaadku marka la soo gooyo si deg-deg ah loo duubi waayo, way dhimataa kaathinoontu, oo si fudud ayey haw